अर्को पार्टी खोल्ने निर्णयमा पुग्यौं : माधव नेपाल « Mayadevi Online News Portal
प्रकाशित मिति : ९ जेष्ठ २०७८ आईतवार ०७:२१
एमाले फेरि फुटको दिशामा लागेको हो  ?
तपाईंहरूकै चाहिँ कुरा के हो त  ?
तपाईंको समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरू अहिले नि एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ र  ?
लोकतन्त्र जोगाए मात्र न कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको उपादेयता रहने हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र परिवर्तनविरुद्धमा, विदेशी दासताको पक्षमा, विदेशीले लगाएको काममा लागेपछि त कसरी प्रतिनिधिसभा जोगिन्छ  ?
लोकतन्त्र जोगाउने भन्ने तर आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई हराउन अर्को पार्टीकालाई सहयोग गर्ने दोहोरो चरित्र भयो भन्ने आक्षेप छ, स्पष्टीकरण नै सोधिएको छ  ?
हामीसँग कुनै मतलब नराखेर उहाँले नै दक्षिणपन्थीहरूसँग साँठगाँठ गरेको होइन ? उहाँले एकलौटी गर्नुभएको छ । विदेशीसँग याचना गर्नुभएको छ । ओलीजीले सोधेको स्पष्टीकरणबारे के कुरा गर्नु !
त्यो कार्यदलको औचित्य उहाँले सिध्याइदिनुभयो । यत्रो कार्यदल बनेको छ, सरसल्लाह गर्नुपर्दैन  ? सोध्दै नसोधी संसद् विघटन गर्ने रु केही सल्लाह गर्नुपर्दैन रु अध्यादेश ल्याउनुअघि केही सल्लाह गर्नुपर्दैन  ?
नेता नेपालले कान्तिपुरमा दिएको अन्तवार्ता साभार गरेका हौं ।